Kooxaha Liverpool Iyo Chelsea Oo Anfield Dhibcaha Ku Qaybsaday, Eden Hazard Oo Cajiib Ah Dhaliyay Iyo Christian Benteke Oo Reds Guuldaro Ka Badbaadiyay. | Haqabtire News
Kooxaha Liverpool Iyo Chelsea Oo Anfield Dhibcaha Ku Qaybsaday, Eden Hazard Oo Cajiib Ah Dhaliyay Iyo Christian Benteke Oo Reds Guuldaro Ka Badbaadiyay.
May 12, 2016 - Written by Sports Staff
Kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayaa dhibcaha ku qaybsaday Anfield kulan Eden Hazard uu gool qurux badan oo shaqsi ah uu Chelsea hogaanka ugu dhiibay laakiin Christian Benteke ayaa dhamaadkii kulankan Reds guuldaro ka badbaadiyay wuxuuna kooxda Klopp u keenay goolka barbaraha.Labada xidig ee xulka qaranka Belgium ee Hazard iyo Benteke ayaa Reds iyo Blues saddexda dhibcood u qaybiyay.
Liverpool ayaa Anfield ku soo dhawaySAY kooxda xili ciyaareedkan dhibaatad wayn la kulantay ee Chelsea oo kulankan iskeentay iyada oo aan kulankan u ciyaarayn wax faa’iido ah laakiin Blues ayaa doonaysay in ay difaacdo maaliyada kooxdeeda isla markaana ay guul ka soo gaadho Liverpool si ay xili ciyaareedka ugu dhamaysan karto dhibcaha ugu badan ee ay heli karto.
Laakiin Reds oo qaab ciyaareed cajiib ah ku soo badhigay Anfield ayaa markale diirada ku hayay in ay Blues xaalada ku sii xumeeyaan. Tababare Klopp ayaa doonayay in uu kooxdiisa soo gaadhsiiyo kaalamaha ugu sareeya ee ay ku gaadhi karaan labada kulan ee xili ciyaareedkan uga hadhay.
Jurgen Klopp ayaa makrale sameeyay sideed isabdal oo ah kooxdii kulankii ugu danbaysay waxaana afarta difaaca ah ku soo wada bilaabay Clyne, Toure, Lovren iyo Moreno, waxaana khadka dhexe wadaagayay Can, Milner iyo Lallan halka Coutinho iyo Firmino ay caawinayeen Sturridge oo safka weerarka hogaaminayay.
Tababare Guus Hiddink ayaa markale goolka ku soo bilabay Begovic waxaana difaaca ku kawada ciyaarayay Azpilicueta, Mikel, Cahill (c) iyo Baba Rahman, waxaana kabtanka kulankan ahaa Cahill.Fabregas iyo Matic ayaa dhexda danbe kuwada jiray halka Pedro, Willian iyo Hazard ay khadka dhexe ka ciyaarayeen isla markaana ay weerarka ka caawinayeen Traore.Jamaahiirta Chelsea ayaa si wayn u soo badhigay sida ay u doonayaan in uu kooxda sii joogo.
LIVERPOOL(4-2-3-1:Mignolet, Clyne, Toure, Lovren, Moreno, Can, Milner, Lallana, Coutinho, Firmino, Sturridge.
KAYDKA:Bogdan, Skrtel, Smith, Lucas, Allen, Ojo, Benteke.
CHELSEA (4-2-3-1):Begovic; Azpilicueta, Mikel, Cahill (c), Baba Rahman; Fabregas, Matic; Pedro, Willian, Hazard; Traore
KADYKA: Amelia, Tomori, Kenedy, Loftus-Cheek, Palmer, Pato, Abraham
Liverpool ayaa qaybta hore ee ciyaarta ku bilaabtay dardar fiican waxayna markiiba abuurtay fursado badanoo ay goolal ku dhalin kartay laakiin goolhaye Begovic iyo difaaca Blues ayaa Reds ka hor joogsaday in ay fursad abuuristeeda goolal u badasho.
DAQIIQADII 5 aad Liverpool ayaa heshay fursada ay hogaanka ciyaarta kula wareegi gaadhay kadib kubbad qurux badan oo ay soo dhistay Coutinho ayaa darbo xoogan ku tuuray goolka Chelsea laakiin kubbada shabaqa Blues ku soo socotay ayuu Abdulrahman Baba si fiican u daboolay.
DAQIIQADII 9 aad Coutinho ayaa kubbada si fiican u dhex jiitay difaaca Blues wuxuuna kubbada halis ah xerada ganaaxa Chelsea ugu ugu dhiibtay Sturridge kaas oo karoos halis ah soo hormariyay goolka kooxda martida ahayd ee Blues, goolhaye Begovic ayaa awoodi waayay in uu kubbada si fiican iskaga saaro waxaana banaanka kubbada iskaga bixiyay Obi Mikel.
DAQIIQADII 19 aad markale Liverpool ayaa ku dhawaatay goolka furitaanka waxaana markan kubbada qurux badan Firmino u bixiyay Sturridge laakiin xidiga ree Brazil ayaa ku fashilmay in uu fursad uga faa’iideeyay kooxdiisa Reds. Wax kastaaba waxay u muuqdeen in Reds ay heli karto goolka furitaanka balse Chelsea ayaa ciyaarta si gaabis ah ugu soo laabanaysay. Sturridge ayaa sidoo kale fursado fiican ka lumiyay kooxdiisa Reds.
DAQIIQADII 23 aad Chelsea ayaa hurdada ka kacday waxayna bilawday in ay weeraro ku qaado goolka Liverpool waxaana tijaabadii ugu horasyay ee goolka Liverpool darbo xoogan ku bartilmaameedsaday Eden Hazard kaas oo meel ka baxsan xerada ganaaxa ka toogtay goolka Reds, laakiin goolhaye Mignolet ayaa si fiican darbadan iskaga badbaadiyay.
DAQIIQADII 32 aad Chelsea ayaan sidii Liverpool fursadaheeda iska lumin waxaana goolka furitaanka Blues u saxiixay Eden Hazard kaas oo dhaliyay mid ka mid ah goolashiisa indho sarcaadka ah kadib markii uu kala dhantaalay difaaca Liverpool isla markaana uu sida uu doono udhex maray ciyaartoyda Reds ka hor intii aanu darbo joog hoose ku socota ku dhalin goolkan. Waxayna ciyaartu noqotay 1:0 ay Chelsea hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Hazard ayaa goolkan dhaliyay waqti ay Chelsea ciyaarta si fiican dib ugu soo laabtay isla markaana ay Blues soo yaraysay fursadihii badnaa ee ay Liverpool abuuraysay. Goolka Hazard ayaa ahaa gool uu si kali ah u shaqaystay wuxuuna u muuqday mid kalsooni buuxda helay. Xaalka Hazard ma yahay ‘Alla ayaa xili ciyaareedka hadda bilaaba”.Kadib markii uu 29 kulan oo Premier Leaque-ga ah uu ku fashilmay in uu shabaqa soo taabtay, Hazard ayaa afartii kulan ee ugu danbeeyay ku dhaliyay afar gool.
Liverpool ayaa dagaal ugu jirtay in ay goolka barbaraha la timaado inta ayna qaybta hore dhamaan laakiin Chelsea ayaa markan si buuxda u ahayd kooxda kubbada ugu badan haystay isla markaana Liverpool xaalka ku adkaysay, waxayna qaybta hore ku dhamaatay 1:0 ay Chelsea hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii ayay Liverpool soo laabtay iyada raadinaysa goolka barbaraha laakiin markale Chelsea ayaa sii ahayd kooxda laga final karo goolka labaad. Daqiiqadii 56 aad Eden Hazard ayaa markale sameeyay farsamo fiican wuxuuna ku dhawaaday in uu Blues udhaliyo goolka labaad laakiin markan Mignolet ayaa si fiican darbada Hazard u badbaadiyay.
DAQIIQADII 60 aad Liverpool ayaa ugu danbayn u muuqatay in ay heshay goolka barbaraha kadib markii uu Adam Lallana uu kubbada aan caadi ahayn u bixiyay Sturridge laakiin darbo gool loo fishay oo uu Sturridge ku bartilmaameedsaday goolka Chelsea ayuu Begovic si fantastika ah isakga badbaadiyay.
Xamaasada ciyaarta ciyaarta ayaa noqotay mid cajiib ah waxaana wax yar kadib darbo xoogan goolka Liverpool ku tuuray Pedro laakiin Mignolet ayaa awooday in uu dib iskaga dhirbaaxo. Liverpool ayaa bilawday in ay culayska saarto Chelsea taas oo keentay in Blues ay difaacato isla markaana ay weerar deg deg ah goolka labaad ku radiso.
Iyada oo Liverpool fursad abuuris badan ku jirt isla markaana ay Moreno iyo Lallana ay fursad fiican abuureen, Hazard, Traore iyo Pedro ayaa weerar deg deg ah soo qaaday, waxaana daqiiqadii 71 aad xaalada Reds sii xumayn gaadhay Traore oo darbo fiican Mignolet ku qasbay in uu badbaadiyo.
Klopp ayaa 15 kii daqiiqo ee ciyaarta ugu danbeeyay ciyaarta ka saaray Adam Lallana iyo James Milner wuxuuna kadyka uga yeedhay Joe Allen iyo Christian Benteke, waxayna markan Liverpool si xoogan ku raadinaysay goolka barbaraha laakiin goolhaye Begovic ayaa soo badhigay qaab ciyaareed fiican si uu Blues natiijada ugu sii ilaaliyo.
DAQIIQADII 89 aad da’yarka Oluwaseyi Ojo oo ciyaarta badal ku soo galay ayaa kubbadiisii ugu horaysay ku dhilin gaadhay goolka barbaraha laakiin darbadiisa ayaa goolka goolka Blues hor martay, laakiin hal daqiiqado oo kaliya kadib
Saamaynta da’yarka Oluwaseyi Ojo ayaa halkeeda ka sii socotay wuxuuna intii lagu jiray saddex daqiiqo oo ciyaarta lagu daray uu sabab u noqday in Liverpool ay goolka barbaraha la timaado kadib markii uu Ojo darbo ku tuuray goolka Blues, waxaana kubbada iska dhirbaaxay Begovic basle waxa uu hadiyad u qadimay Christian Benteke kaas oo markiiba darbo gaaban oo madax ah ku dhaliyay goolka ay Liverpool sida wayn ugu baahnayd, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barbaro 1:1 ah.
Inkasta oo uu Begovic kulankan soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah isla markaana uu kooxdiisa ka badbaadiyay fursado tiro badan haddana isaga ayaa ugu danbayn qalad ku lahaa in Blues ay waydo saddexda dhibcood, waxaana amaan goolkan ku lahaa Ojo oo Begovic ku qasbay in uu ugu danbayn qalad sameeyo. Ciyaarta ayaa ugu danbayn ku dhamaatay barbaro 1:1 ah.